Dhageyso Galmudug oo beenisay in walaac laga muujiyay ciidamada Haramacad ee ku sugan Dhuusomareeb | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso Galmudug oo beenisay in walaac laga muujiyay ciidamada Haramacad ee ku...
Dhageyso Galmudug oo beenisay in walaac laga muujiyay ciidamada Haramacad ee ku sugan Dhuusomareeb
Wasiirka warfaafinta Galmudug ayaa beeniyay in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad laga saaray magaalada Dhuusomareeb oo maalinta berito uu ka furmayo shir u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada.
Qaar kamid ah warbaahinta ayaa qortay in Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in ciidamadaas laga saaro Dhuusomareeb, iyagoo u arka inay yihiin ciidamo halis ku ah ammaankooda loona adeegsan karo inay fuliyaan dano u gaar ah madaxda dowladda federalka.
Wasiirka warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa sheegay in aysan jirin sabab ciidamada Haramcad looga saaro magaalada Dhuusomareeb. Wuxuu sidoo kale beeniyay in Puntland iyo Jubbaland walaac ka muujiyeen ciidamaddaan.
“Waa dacaayad qaawan oo lagu doonayo in lagu qalqal galiyo shirka iyo qorshaha meesha ka socda,” ayuu yidhi wasiir Falagle.
Wasiir Falagle waxa uu sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan shirka inay kasoo bixidoonaan go’aano siyaasadeed oo iskusoo dhoweeya dowladda federalka iyo dowladdaha xubnaha ka ah.
Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa maanta illaa iyo berito ku wajahan magaalada Dhuusomareeb oo ammaankeeda aad loo adkeeyay. Madaxweynayaasha ayaa laftooda wata ciidamo si gaar ah amnigooda u suga.
Markii ugu dambeysay oo ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ku shiraan Dhuusomareeb waxay ahayd September 2018, iyagoo xilligaas ka shiray khilaafkii ka jiray Galmudug dhexdeeda iyagoo dowladda federalka ku eedeeyay inay masuul ka ahayd in Galmudug noqoto labo garab.
Previous articleUN Mission in Somalia welcomes upcoming Federal Member States forum
Next articleBanaanbax culus oo kasocda Dagmada Afgooye